रोचक कुराहरु Archives -
Tag: रोचक कुराहरु
त्यो रातको यथार्थ कथा : र’क्सीको जो’समा भ’ट्टी सा’उनिलाई रा’तभर !
September 9, 2020 September 9, 2020 chothale
गाउँमा हुँदा दिन भरी यता उता बरालियो अनि साँझ परेपछि र’क्सी भ’ट्टी तिर छिरिन्थ्यो । हामी ४ जना साह्रै मिल्ने साथीहरूको समूह थियो । प्राय हरेक साँझ सँगै भ’ट्टी छिर्ने र र’क्सी खाई घर तिर लाग्थ्यौ । एक दिन यस्तै ६ बजे तिर सँधैको भट्टीमा छिर्यौ । १ बोतल खोया बिर्के (लोकल रक्सी) र २ प्लेट सुकुटी मगायौ । केही छिन मा एउटा केटीले हाम्रो खानेकुरा लिएर आई । यसो हेरेको केटी नयाँ देखे । पहिलो पटक उसलाई हाम्रो गाउँमा देखे । ती बहिनीले र’क्सी र सुकुटी टेबलमा राखी अनि…
uncategorizedरोचक कुराहरुLeaveacomment
सुरुमा मेरै सरले गरे…..पछि अन्य मान्छेलाई पनि ल्याउन थाले !
September 7, 2020 September 7, 2020 chothale
बैतडी । गत मंसिरको कुरा हो । त्यो दिन आमा घास लिन जानुभएको थियो । बा काम गर्न स्वर (पिथौरागढ,भारत) गएका थिए । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसिरहेको बेला खडक सर आए । जसले मलाई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म पढाएका थिए । मैले तल्लो घरमा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई च्या’प्प समाते । वरपर कोही मानिस थिएनन् । मेरो मुख बन्द गरेर उनले लुगा फु’का’ल्न थाले । म केही बोल्न सकिन् । अप्रत्यासित रुपमा यसो भइरहँदा जोर जोरले चि’च्या’उन खोजेकी थिए । तर मुख बन्द थियो । आवाज नै…
एक अर्काको माया हेर्दै दिक्पाल र अन्जली ! सक्दो सेयर गरौँ
September 6, 2020 September 6, 2020 chothale
काठमाडौं । गीतकार दधी अधिकारीको नयाँ गीत ‘मेरो माया हेरिदेउ एक फेरी’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक एवं संगीतकार शिशिर योगीको संगीत तथा शिशिर योगी र रजिना रिमालको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा मोडल अञ्जली अधिकारी तथा दिक्पाल कार्की फिचर्ड छन् । साइपल क्रियसनले निर्माण गरेको भिडियोमा राजन शाहीको कोरियोग्राफी, आवेश बज्राचार्यको सिनेमाटोग्राफी र माधव बेलबासेको सम्पादन छ । भिडियोमा प्रहिल कार्कीको निर्देशन छ । भिडियो साइपल क्रियसनको युट्युबबाट भिडियो रिलिज गरिएको हो । घर मा कोही नहुदा यी जोडिले यस्तो गरे पछि…. (हेरौं भिडियो) मेरो विवाहको पहिलो रा’त थियो ।…
मनोरन्जन, समाचाररोचक कुराहरुLeaveacomment
जानि राखौँ ? युवतीहरुले नु’हाउँदा यस्ता कुराहरु सो’च्छन !
यु’वतीहरुलाई आफू नु’हाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चि ’न्ताले स’ताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिला हरुले नु’हाउदा आफ्नाे श’रीर र कपालको बारेमा चि’न्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुम भित्र आफैसँग छि’ ल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चि’न्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टि’काउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् । केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चि’न्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य…
मनोरन्जन, राेचकरोचक कुराहरुLeaveacomment
काठमाडौं । नेपालमो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अ’नौठो परम्पराहरु रहेका छन् । चीनका मानिसहरुको बारेमा भनिन्छ, उनीहरु रो’मान्टिक विचारको मामलामा अलिकति रु’ढिवादी नै हुन्छन् । तर विहेपछि खेलिने खेल (वेडिङ,गेमको)को सन्दर्भमा उनीहरु खुला विचारका हुन्छन् । यस्तोमा एक वेडि’ङ गेमको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भा’इरल बनेको छ । जसमा बेहुलाका साथीहरु उनकै अगाडी उनकी श्री’मतीका लु’गाहरु फु’का लिरहेका छन् । विवाह भएपछि युवतीहरु मोटाउनुको खास कारण यस्तो रहेछ हाम्रो समाजमा यी यस्ता घटनाहरु प्राय देखिरहेका नै हुन्छौ जहा मोटो मान्छेलाई कति मोटो भन्ने अनि जो दुब्लाृे छ त्यस्तालाई लुरे भनेर जिस्काउने । दुव्लो…
September 6, 2020 chothale
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ रु अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द। यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन…
मनोरन्जनरोचक कुराहरुLeaveacomment
मेरो विवाहको पहिलो रा’त थियो । म पहिलो रात कुनै पु’रुषसँग अ’न्तरङ्ग हुँदै थिएँ । नजिकका साथीहरुसँग भएका कुराकानी र हेरेका पो’र्न भिडियोले मेरो दिमागमा सपना र इच्छाहरुका कैयौँ तस्बिर बुनेको थिए । हातमा दूधको गिलास लिएर टाउको झु’काएर जब म मेरो सुत्ने कोठामा गएँ । त्यति बेलासम्म सबै सोचे अनुरुप नै थियो कलेजका दिनहरुमा मात्र होइन, अफिसमा पनि मैले कैयौँ केटाकेटीहरुबीच ग’हिरो मित्रता देखेकी थिएँ । उनीहरु आफ्ना पार्ट’नरका काँधमा आफ्नो टाउको राख्थे । हात समातेर घुम्थे । म मेरो पनि त्यस्तै कोही साथी हुनेछ भनेर सोच्थेँ । हाम्रो…
एक बर्षका बालकले जिउँदै सर्प निल्दै गरेको आमाले देखेपछि !
काठमाडौं। एक बालकले आफ्नो घरमा खेल्ने क्रममा सर्प निलेका छन् । एक बर्षका बालकले सर्प निलेको घटना पछिल्लो समय चर्चामा आएको छ । घरमा खेल्दा खेल्दै एक बर्षका बालकले जिउँदै सर्प मुखमा हालेको बताइएको छ । यो घटना भारत उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लाको हो । बालकले घरमा खेल्दाखेल्दै सर्प निलेको समाचार भारतिय मिडिया टाइम्स अफ इण्डियाले लेखेको छ । बरेलीको फतेहगंज पश्चिमी थानाक्षेत्र भोलापुरमा एक बर्षका बालकले जिउँदै सर्प निल्दै गर्दा उनकी आमाले देखेकी थिइन् । आमा देखे लगत्तै सर्पको पुच्छर समातेर बाहिर निकालेको बताइएको छ । शनिबार घरमै खेलिरहेको बेला…
राेचक, समाचाररोचक कुराहरुLeaveacomment
September 2, 2020 September 2, 2020 chothale
महिलालाई सा’रीरीक चा’हना बढी हुन्छ ! बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो – महिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् । त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिना’वारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवा’सले बढी रमाइलो हुने कुरा बताएका थिए । यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावा’री पूरा भएको पाँच देखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु ड’ बढी हुन्छ । त्यस…
को’रोना भाइरस प्रभाव : कस्ता कुरा सोँच्दैछन् युवा, युवतीहरु ? ( जानी राखौँ )
बीबीसी । को’रोना भाइरस महामारीपछि विश्वभर मानिसका सम्वन्धमा बदलाव आएका छन्। एउटा भाइरसले विश्वलाई पुरै बदलेको छ। लकडाउनपछि मानिसहरु एउटै छानामुनी रहन बाध्य भए। परिवारमा साथ(साथ लामो समय विताउन थाले। अनी सम्वन्धका तनाब खुलेर बाहिर आउन लागे। साथीहरुसँग धेरै समय विताउने मानिसको उनीहरुसँग दूरी बढ्न थाल्यो। महामारीबाट बच्नको लागि मानिसहरु घरभित्रै सिमित भए। अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले सम्वन्धमा आर्थिक समस्या पनि थपियो। समयसँगै सम्वन्धमा तनाब सुरु भएका घटनाहरु बाहिरिन थाले। कोरोना भाइरस सुरुमा चीनमा देखिएको थियो। यो भारसले सम्वन्धहरुमा पनि चीनबाटै प्रभाव पार्न सुरु गर्यो। चीनको शाक्ची प्रान्तमा यसका खराब उदाहरण देखिए।…